Entertainment Archives | Page2of3| Kingdom of news
သင့်အမြင်အာရုံကို ဒွိဟဖြစ်စေလို့ ၂ ခါပြန်ကြည့်ရမယ့် ဓါတ်ပုံများ
သင့်အမြင်အာရုံကို ဒွိဟဖြစ်စေလို့ ၂ ခါပြန်ကြည့်ရမယ့် ဓါတ်ပုံများ (၁၄ ပုံ) တချို့သော ဓါတ်ပုံတွေဟာ ရိုက်ကူးချိန်မှာ မတော်တဆ အယူအဆ၊ အနေအထိုင်မှားယွင်းစွာနဲ့ နားလည်ရခက်တဲ့ ပုံမျိုးတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ဘယ်လိုပုံတွေက သင့်ကို ၂...
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အလှဆုံးမင်းသမီး ၁၀ ယောက်
Unicode ထိုင်းနိုင်ငံဟာ အချောအလှတွေနဲ့ ဝတ်စားပုံ ဖက်ရှင်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးပါတယ်။ အဲဒီ အထဲကမှ မင်းသမီးတွေဆိုရင် ပိုလို့တောင် ချောလှ ကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အလှဆုံး မင်းသမီး ၁၀ ယောက်က ဘယ်သူတွေလဲနဲ့ သင်...
အားကစားလောကမှ ရယ်မောစရာအခိုက်အတန့်များ (ပုံ-၁၇ ပုံ)
အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာ အနိုင်ရဖို့အတွက် တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ သူနိုင် ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကြဲရတာ ထုံးစံတစ်ခုပါ။ အဲဒီထဲကမှ ကင်မရာများနဲ့ မှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါ ရယ်မောစရာပုံတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေ ရယ်မောစရာကောင်းမလဲကတော့ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ တစ်ပုံချင်းစီကို ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ တွဲကြည့်ပေးရင် ပို...
Spider-Man3ရဲ့ villain နဲ့ အခြားသတင်းအချို့ထွက်ပေါ်လာ
Marvel ကတော့ Tom Holland ရဲ့ Spider-Man3ရဲ့ သတင်းအချို့ကို ပေါက်ကြားထားပါတယ်။ Spider-Man3ကတော့ စတင်ရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ် Den of Geek မှရရှိထားတဲ့သတင်များအရ ဇာတ်ကားအတွက် Holland...
2013 Captain America မင်းသား Christ Evans ပါဝင်သော Snowpiercer Sci-Fi ရုပ်ရှင်ကား Netflix တွင် Series တွဲဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ရှိ
Unicode ကဲ အခုတစ်ခါပိတ်ရက်မှာကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့အက်ရှင် ဒရာမာ သိပ္ပံကားကြီးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကတော့ အနာဂတ်ကာလကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိကာလမှာ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအပါအဝင်၊ရာသီဥတုဖောက်ပြန်လာမှုတို့ကို မီးမှောင်းထိုးရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ 2013 က Captain America မင်းသားကြီး Chris Evans သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Snowpiercer...
Unicode ကျွန်​တော်တို့covid-19 ​ရောဂါ​ကြောင့်အိမ်ထဲမှာ​နေ​နေရတဲ့အချိန်တွင်မပျင်းရ​​​​​အောင်ဖြစ်ရပ်မှန်ရုပ်ရှင်ကား​ကောင်းတစ်ကားမိတ်ဆက်​​​ပေးခြင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကဖြစ်သွားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ Chiang Rai ပြည်​နယ်မှာ ​တောဝက်​ဘောလုံးအသင်း က​လေး၁၂ ​ယောက်နဲ့ နည်းပြတစ်​ယောက်တို့ ဂူထဲလည်ပတ်ရင်​ရေပြည့်မူ​ကြောင့်ပြန်မထွက်နိုင်ဘဲ ၁၁ရက်ကြာဂူထဲတွင်ပိတ်မိ​ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအဖြစ်ပျက်ကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ The Cave ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်​ကား​ကောင်း​လေးနဲ့မိတ်ဆက်​​ပေးခြင်ပါတယ်။ The Cave...
ကျွန်​တော်တို့ Fast and furious ရုပ်ရှင်ရဲ့ မင်းသားကြီး Vin Dieael ကားသစ် Bloodshot (2020)
Unicode ကျွန်​တော်တို့ Fast and furious ရုပ်ရှင်ရဲ့ မင်းသားကြီး Vin Dieael ကားသစ် Bloodshot (2020) ရုပ်ရှင်ကားသစ်နဲ့မိတ်ဆက်​ပေးပါရ​​စေ။ Bloodshot ရုပ်ရှင်က ၂၀၀၀ ခုနှစ် သိပ္ပံ စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်းဇာတ်လမ်းမှာ...
Zoo Netflix TV show
Zoo isabrand new global thriller series, based on the book by James Patterson. Across the globe, lethal animal...